Intshayelelo kunye nezibonelelo zesofa yombane – Ifanitshala yeBaothian Co., Ltd.
Usihlalo wesanti wombane unamaqhosha ahlukeneyo. Amaqhosha aphezulu nasezantsi kwiqhosha anokulawula ukunyuka nokuhla komva kwesofa. Ngokulungiswa kwesofa yombane, isikhundla somntu kwisitokhwe siza kutshintsha, njengokubuya umva. Ngamanye amaxesha, abantu baya kubuyisa umva esinqeni, kwaye ngokuchaseneyo. Ukuba unomdla wokuba nepls enjalo qhagamshelana nathi- a umenzi webhedi yesofa.
Inkqubo ye- "umlingo" isitulo sesofa yombane yile xa uhleli, umqolo uphezulu, kwaye akukho mfuneko yokongeza isihlalo seenyawo ngaphambili, kwaye iinyawo zinokuwa ngokwendalo okanye zibekwe kwindawo yokuhlambela iinyawo. Ukuba ufuna iinyawo, ungasebenzisa iqhosha lolawulo ukuze uvuke ngokwendalo. Nangona ulwakhiwo lunzima ngakumbi kunezitulo zemveli, intsebenzo inokuthenjwa ngakumbi kwaye inqanaba liphezulu.
Izinto eziluncedo zesofa yombane:
1. Isofa yombane inefuthe lokunciphisa uxinzelelo. Isitulo sesofa sithambile kwaye uxinzelelo emzimbeni womntu lincinci, kuya kuba lula ngakumbi ukuhlala kwisitulo sesofa;
2. Isofa yombane inomsebenzi wokuthambisa. Xa umntu ehleli kwi isofa yanamhlanje yekona kwaye yenza umsebenzi omncinci, iya kubangela ukungcangcazela okuncinci kwemithombo kunye nezinto ezithambileyo. Umzimba womntu uxhomekeke kumandla e-elastic of changes periodic, engadlala indima yokuthanjiswa.
3. Isofa yombane iyaguquguquka. Umqamelo wesofa wenziwe ngezinto ezithambileyo ezifana nelinen, ntsundu, isiponji, njl. Kukho imithombo emininzi ngaphantsi, Zombini zithambile kwaye zi-elastic.
Iimpawu: Thenga isofa, isofa yombane
Ixesha lokuposa: 2020-08-01